होक्काइडोमा जाडो पहिरन! तपाईंले के लगाउनु पर्छ? - Best of Japan
एक महिला खडा छ र जापानी जाडो केबिनहरुमा चिसो महसुस गर्दै छ निing्गल टेरेस फुरानो, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा
होक्काइडोसँग लामो हिउँद छ र टोकियो, क्योटो र ओसाकाको तुलनामा धेरै चिसो छ। जाडोमा होक्काइडो यात्रा गर्दा, कृपया बाक्लो जाडोको लुगा तयार गर्नुहोस्। म डिस्पोजेबल तातो प्याक र समान उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु। सब भन्दा राम्रो जुत्ता हिउँ जुत्ता वा हिउँ पदयात्रा गर्ने जुत्ता (सुनोतोर) हो, तर यदि तपाईं शहर वरिपरि हिड्नुभयो भने तपाईं सामान्य स्नीकरहरूमा एन्टी-स्लिप उपकरणहरू संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखमा, मँ भन्छु कि तपाईले जाडोमा कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ हक्काइडोमा र बिभिन्न कपडाहरूको तस्वीर प्रदान गर्ने। म जाडो को लुगाहरु किन्न वा भाँडामा दिन को लागी केहि विचार दिनेछु।
होक्काइडोमा, जाडोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य सफोरो हो। तर यदि तपाइँ जाडोमा विशाल परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, म Asahikawa, Biei र Furano जान सिफारिस गर्दछु। तपाईंले साँच्चिकै शुद्ध संसारको आनन्द लिनुहुनेछ! सामग्रीको तालिका असाहिकावा फोटोहरूको होक्काइडो म्यापमा जाडो परिदृश्यको फोटोहरू ...
होक्काइडोमा जाडोमा लाउन लुगा
कोट, मफलरहरू, आदि आवश्यक छ
जुत्ता तयार गरौं
कसरी भित्री लगाउने
डिस्पोजेबल तातो प्याकहरू सिफारिस गरिन्छ
कसरी जाडो किन्न वा भाँडामा लगाउने आदि।
Asahikawa शीतकालीन उत्सव मा, धेरै ठूलो हिम प्रतिमाहरु, Hokkaido, जापान प्रदर्शित छन्
यो नोभेम्बर देखि अप्रिल को शुरुवात सम्म घाम लाग्छ
होक्काइडोमा, नोभेम्बरमा हिउँ पर्न थाल्छ, र डिसेम्बरको मध्य बीचबाट पर्याप्त रूपमा स collect्कलन गर्न थाल्छ। हिउँ वर्षाको सबैभन्दा बढी रकम जनवरीको फेब्रुअरीदेखि फेब्रुअरी बीच हो। होक्काइडोको दक्षिणी भागमा अवस्थित हकोडाटमा अप्रिलको सुरूमा हिउँ हराउनेछ। सप्पोरो र असाहिकावामा पनि हिउँ अप्रिलको मध्य भागमा पर्न सक्छ।
बिहान र साँझको कम तापक्रम जाडोको समयमा होक्काइडोमा -१० डिग्री सेल्सियस तल झर्नु असामान्य कुरा होइन। सडक सतह स्थिर र धेरै फिसलन हुन सक्छ। यसको कारणले गर्दा, कृपया होकाइडोमा जानु भन्दा अघि जाडोका लुगाहरू तयार गर्न नबिर्सनुहोस्।
घर भित्र न्यानो छ
मौसम क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ, होक्काइडोको बिभिन्न भागहरूमा पनि। यदि तपाईं चिसो ठाउँहरू जस्तै शिरेटोको वा अबाशिरीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले धेरै जाडोका लुगाहरू तयार गर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं सप्पोरो वा हकोडाट शहरको वरिपरि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो भवनहरू भित्र एकदम न्यानो छ, त्यसैले तपाईंले घर भित्र लगाउने कुराको लेखा लिनु आवश्यक छ। जब सडकमा हिउँ पग्लन्छ, पानी तपाईंको जुत्ताहरूमा छिर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले कृपया वाटरप्रूफिंगलाई पनि विचार गर्नुहोस्।
होक्काइडोमा जाडोमा लगाइएको लुगाका केही उदाहरणहरू तल दिइएका छन्।
ठूलो मफलर राख्न यो उपयोगी छ। तापक्रम = Pixta समायोजन गर्न घरको भित्रि मफ्लर हटाउनुहोस्
मफलर, आन्तरिक इत्यादिको साथ तापमान परिवर्तनमा समायोजन गर्नुहोस्।
तपाईंको कोट या त ओभर कोट वा डाउन ज्याकेट हुन सक्छ। यद्यपि जापानका युवाहरूमा ओभरकोट यी दिन डाउन ज्याकेट भन्दा बढी लोकप्रिय छ। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रमा, डाउन ज्याकेट घर भित्र धेरै तातो हुन सक्छ। त्यसैले म एक ओभरकोट लगाउने सिफारिश गर्दछु र पातलो डाउन बनप्ट लगाउन (जस्तो कि UNIQLO अल्ट्रा लाइट डाउन) भित्र चिसो छ भने। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् यो आधिकारिक पृष्ठ UNIQLO अल्ट्रा लाइट डाउनको बारेमा।
कोट र मफलरको बाहेक, पन्जाको साथ बुनाई टोपी पनि एक आवश्यकता हो। ठूला मफलरहरू अधिक सुविधाजनक छन्। तापक्रम समायोजन गर्न घर भित्र मफलर लिनुहोस्। बुन्ने टोपी कानमा कभर गर्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्दछ। यदि यो चिसो छ भने, तपाइँको कान पहिले धेरै चिसो हुनेछ। तपाईंको पञ्जाहरू जलरोधक हुनुपर्दछ। वाटरप्रूफ प्रकारको साथ, तपाईं हिउँ छोए पनि तपाईंलाई चिसो महसुस हुने छैन।
हुड कोट सिफारिस गरिएको छ
यदि सम्भव छ भने, म हुडको साथ कोट तैयार गर्न सिफारिस गर्दछु। हुडको साथ, तपाईं शरीरको तापक्रममा खसाललाई पनि रोक्न सक्नुहुन्छ जब हावा कडा भए पनि। भवनमा वा भूमिगत सडकमा हिंड्दा पनि तपाईं आफ्नो शरीरको तापक्रम बढ्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले हुड हटाउनुभयो भने।
म यो लेखमा पछि छलफल गर्नेछु जहाँ यो लुगा किन्न वा भाँडामा लिन्छु।
कृपया होक्काइडोमा सिफारिस गरिएको जाडो फेसनको तस्वीरहरूका आनन्द लिनुहोस्।
जाडोमा होक्काइडोमा, यस्तो कोट = शटरस्टक लगाउन उपयुक्त हुन्छ
यदि यो धेरै चिसो छैन भने, तपाईं हुड हटाउन र यो जस्तै लगाउन सक्नुहुन्छ
कृपया ग्लोभ्स र बुनाको टोपी = शटरस्टक लगाउन नबिर्सनुहोस्
किनकि तपाईं यस्तो हिउँमा हिंड्न सक्नुहुन्छ, हिउँ जुत्ताहरू = शटरस्टक तयार गर्न राम्रो हुन्छ
यो कालो, होक्काइडो = शटरस्टकमा पign्क्तिबद्ध गर्न खराब छैन
सडक सतह प्राय जसो स्थिर हुन्छ, कृपया गैर पर्ची जुत्ता तयार पार्नुहोस्, होक्काइडो = शटरस्टक
के तपाईं होक्काइडोको हिउँको खेतमा त्यस्तो तस्वीर लिनुहुन्न? = शटरस्टक
जब यो चिसो हुन्छ, चलाउनुहोस् हुड, होक्काइडो = शटरस्टकमा राखौं
हरियो र पहेंलो कपडा महिला पेइन रूखहरू र सेतो हिउँ पृष्ठभूमिमा = शटरस्टक
हिउँ जुत्ता सबै भन्दा राम्रो हो
यदि तपाईं बर्फी क्षेत्रमा जाने योजना बनाउनुहुन्छ भने, लामो हिम जुत्ता सिफारिश गरिन्छ = Adobestock
हिउँ जुत्ताहरु मा तल मा एक गैर पर्ची समाप्त छ
हिउँ पर्ने सडक धेरै फिसलन भएको छ। हिउँ हटाइएको सडक पनि स्थिर र फिसलन छ। त्यस्ता सडकहरूमा सुरक्षित हिड्नको लागि हिउँ जुत्ता वा हिउँ पदयात्रा गर्ने जुत्ता (स्नोत्र) लगाउनु उत्तम हुन्छ जुन पर्ची नपरोस् भनेर मेशिन गरिएको छ।
यदि तपाईं हिउँ पर्ने ठाउँमा जान चाहानुहुन्छ भने हामी लामो हिम जुत्ता सिफारिस गर्दछौं। यदि तपाइँको जुत्ता छोटो छ, हिमपात तपाइँको जुत्ता मा प्राप्त र यो धेरै चिसो हुनेछ।
जब यो चिसो हुन्छ, यो दुई जोडी मोजा लगाउन सिफारिस गरिन्छ।
तलहरूमा एन्टी-स्लिप उपकरणहरू
यदि तपाईं सामान्य जुत्ता लगाउनु भएको छ भने पनि, तपाईं हिंड्न धेरै सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले तलहरूमा एन्टी-स्लिप उपकरणहरू राख्नुभयो भने।
त्यहाँ एन्टी-स्लिप उपकरणहरूको विभिन्न प्रकार छन्। एउटा सेट १०००-२००० येन हो। ती शहरहरूमा नयाँ Chitose एयरपोर्ट पसल, सुविधा स्टोर र सुपरमार्केटमा बेचिन्छ।
यद्यपि, साधारण जुत्ताको साथ, हिउँ जुत्तामा जान्छ र चिसो जान सक्छ। गहिरो हिउँ संग सडकमा यात्रा नगर्न सावधान रहनुहोस्। यदि जुत्ताहरू वाटरप्रूफ छैनन् भने चिसो पानीले उनीहरूलाई घुसाउँछ, त्यसैले यो वाटरप्रूफ स्प्रे प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
एन्टी-स्लिप उपकरण एक्लोमा संलग्न गर्नुहोस् (१) यदि तपाईं यो एक्लोमा संलग्न गर्नुहुन्छ भने, तपाईं हिउँ पर्ने सडकमा पिसिनु हुँदैन = Pixta
एन्टी-स्लिप उपकरण एक्लोमा संलग्न गर्नुहोस् (२) तपाईं चाँडै यसलाई एकमात्र = Pixta मा संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ
एन्टी-स्लिप उपकरण एक्लो संलग्न गर्नुहोस् एकमात्र ()) रबर अनुमानहरू ग्रिप सडक सतह दृढतापूर्वक = Pixta
Uniqlo उत्पादनमा क्लोजअप HEATTECH ट्याग। HEATTECH थर्मल इन्सुलेशन प्रदान गर्दछ शरीर द्वारा उत्पन्न बाफलाई तातोमा रूपान्तरण गरेर
हामी जापानी मानिसहरु कहिलेकाँही होक्काइडो जस्ता चिसो क्षेत्रमा दुईवटा टुक्राहरू कपडा लगाउँछौं। अण्डवियर, पक्कै पनि लामो बाहुला हुनु पर्छ। यदि तपाईं कोट लगाउनुहुन्छ भने तपाईंलाई धेरै चिसो लाग्छ भने, दुईवटा टुक्राहरू अंडरवियर किन लाउनुहुन्न?
माथिको तस्वीरको जस्तो कछुवा लगाउँदा यसले न्यानो बनाउँदछ। टर्टलनेक भन्दा बाहेक, हल्का फलो स्वेटर लगाउन पनि सिफारिस गरिन्छ।
प्यान्ट अन्तर्गत टाईट लगाउन पनि सिफारिस गरिन्छ।
हालसालै, UNIQLO र अन्य कपडा स्टोरहरूले उच्च-प्रदर्शन अण्डवियर बेचेका छन्। यी अंडरवियर पसिना द्वारा तातिन्छन्। UNIQLO बाहेक, सुपरमार्केटहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले पनि बेच्छन।
यदि तपाइँ विशेष गरी चिसो क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यी टाईटहरू र नियमित प्यान्टमा अतिरिक्त जाडो प्यान्ट लगाउन सक्नुहुन्छ।
जब यो चिसो हुन्छ, डिस्पोजेबल बॉडी वार्मर्स धेरै उपयोगी हुन्छन् = एडोब स्टक
जापानमा डिस्पोजेबल तातो प्याकहरू (बडी वार्मर्स) जताततै बेचिन्छ। 30० को सेट पनि १००० येन भन्दा बढि हुनु हुँदैन। यी तताउने प्याकहरू प्लास्टिकको झोलाबाट हटाउनुहोस् र हल्का रूपमा हिलाउनुहोस्। त्यसो गरिसकेपछि, तिनीहरू द्रुत तातो गर्न थाल्छन्।
त्यहाँ डिस्पोजेबल तातो प्याक को धेरै प्रकार छन्। त्यहाँ प्रकारहरू छन् जुन पछाडि वा अंडरवियरसँग जोडिएको हुन्छ, र प्रकारहरू जुन खल्तीमा प्रयोग गरिन्छ। कृपया कुन संयोजनले तपाईंलाई उत्तम सूट गर्दछ हेर्न विभिन्न संयोजनहरूको प्रयास गर्नुहोस्।
कपडा आदि। तपाइँ तयारी गर्न चाहानुहुन्छ
यहाँ जाडो मा होक्काइडो मा यात्रा गर्दा तपाइँ लाग्न सक्ने केहि लुगा र उपकरणहरू छन्।
कोट: हुन सक्छ भने हुड
स्वेटर: प्राथमिकताका प्रकाश ऊनको सामग्री
उत्तम: UNIQLO अल्ट्रा लाइट डाउन आदि
ग्लोभ्स: वाटरप्रूफ टाइप
शीतकालीन ट्राउजर: विशेष गरी चिसो क्षेत्रमा जाँदा
हिउँ जुत्ता: तपाईं एक गैर पर्ची उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
डिस्पोजेबल तातो प्याक
यदि तपाईं स्की रिसोर्टमा जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई स्की लगाउने र चश्मा पनि आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाइँ तपाइँको घर मा यी सबै जाडो को कपडा तयार गर्न कठिनाई छ, तपाईं निम्न योजना विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
योजना A: तिनीहरूलाई होक्काइडोमा किन्नुहोस्
सस्तो र सबैभन्दा व्यावहारिक जाडोको लुगा, हिउँ जुत्ता आदि प्राप्त गर्ने तरिका होक्काइडोमा किन्नु हो। कपडा स्टोर र सुपरमार्केटहरू जाडोको कपडा र जुत्ता बिक्री गर्छन् होक्काइडोका लागि सबैभन्दा उपयुक्त।
नयाँ सस्तोस एयरपोर्टमा खरीद गर्न सजिलो ठाउँ हो। यस एयरपोर्टमा यात्रुहरूका लागि धेरै कपडा पसलहरू छन्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई एयरपोर्टमा किन्नुभयो भने, तपाईं कुनै समस्या बिना नै होक्काइडो यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि धेरै यात्रुहरूले एयरपोर्टमा पनि किनमेल गर्दछ, त्यहाँ बिक्री-विक्री कपडा हुन सक्छ जुन तपाईंलाई अधिक उपयुक्त थियो।
यदि तपाईं एयरपोर्टमा किन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो गन्तव्यको नजिक लुगा स्टोर वा सुपरमार्केटबाट किन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं साप्पोरोमा बस्नुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं सप्पोरोमा स्टोरहरू किन्नु होस् एयरपोर्टको भन्दा तपाई लामो यात्रा पछि थकित हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा, एयरपोर्टको वरिपरि हिंड्नुको सट्टा तपाईको होटेलमा जानु बढी व्यावहारिक हुनेछ।
सप्पोरो शहरमा सबै भन्दा सिफारिश गरिएका पसलहरू किनमेल केन्द्र "शिनसपोरो एआरसी सिटी सनपियाजा" हुन्, जुन जेआर शिन-सप्पोरो स्टेशनमा सिधा जडित छ। ती मध्ये सुपरमार्केट "AEON" हो। तपाईं यहाँ सस्तोमा लुगा किन्न सक्नुहुन्छ।
यस बाहेक, सप्पोरो शहरमा, सपोरो स्टेशन वरपर धेरै कपडा पसलहरू छन्।
यदि तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुहुन्न र हकोडाट वा Asahikawa मा रहनुहुन्छ भने, तपाईं स्थानीय कपडा स्टोर र सुपरमार्केटबाट किन्न सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म, कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईंको लागि उपयुक्त लुगाहरू बाहिर चलाउन जोखिम छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले होक्काइडोमा धेरै असुविधा महसुस गर्नुहुनेछ। तसर्थ, अग्रिम न्यूनतम कपडा प्राप्त गर्न यो उचित हो। निम्न योजनाहरू यस उद्देश्यका लागि विचार गरिनेछ।
योजना बी: तिनीहरूलाई टोकियो मा किन्नुहोस्।
यदि तपाईं होक्काइडो जानु अघि टोकियो वा ओसाका भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, म त्यहाँ जाडोको लुगाहरू किन्न सिफारिस गर्दछु। टोकियो र ओसाकामा कपडा स्टोर होक्काइडोको स्टोर भन्दा अलि महँगो हुन सक्छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै सस्तो पसलहरू छन्। मेरो मुख्य सिफारिश भनेको ठूलो आउटलेट मलहरूमा हिउँदको लुगा किन्नु हो। उदाहरणको लागि, माउन्ट नजिकै। फुजी गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट हो, जापानको सब भन्दा ठूलो आउटलेट मल। यो आउटलेट मलमा, तपाईं माउन्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तिम्रो अगाडी फुजी। कृपया यसको बारेमा निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
योजना सी: तिनीहरूलाई अनलाइन खरीद गर्नुहोस्
हामी जापानी मानिसहरु अक्सर कपडा किन्नको बेला अनलाइन शपिंग प्रयोग गर्दछौं। जापानमा जाडोको कपडा बेच्ने धेरै अनलाइन शपिंग साइटहरू छन्।
दुर्भाग्यवस, ती अनलाइन शपिंग वेबसाईटहरू हाल केवल जापानीमा छन्। ती मध्ये, त्यहाँ छ "Rakuten ग्लोबल मार्केट" एक शपिंग साइटको रूपमा जसले अ supports्ग्रेजी समर्थन गर्दछ र जापानबाट बाहिर पठाउँदछ।
Rakuten जापान मा अमेजन संग सबैभन्दा ठूलो किनमेल साइट को रूप मा प्रसिद्ध छ। कसरी यी साइटहरू प्रयोग गरेर न्यूनतम तयारीहरू गर्ने?
योजना डी: भाडा सेवा प्रयोग गर्नुहोस्
अन्तिम योजना भनेको कपडा भाडा सेवा प्रयोग गर्नु हो। यद्यपि दुर्भाग्यवश, होक्काइडोमा स्की लगाउने बाहेक धेरै कपडा भाडा सेवाहरू छैनन्।
होक्काइडोमा, एक स्थानीय पर्यटन सम्बन्धित साइट "टाटारी" ले जाडोको कपडा भाडा सेवा प्रदान गर्दछ। यद्यपि वेबपृष्ठ केवल जापानी भाषामा समर्थित छ।
>> "Tamrai" को लागी जाडोको कपडा भाडा सेवा यहाँ छ (जापानी मात्र)
नयाँ Chitose एयरपोर्टको छेउमा जाडोको कपडा भाडामा लिनको लागि पसल छ। स्थानीय कार भाडा कम्पनीहरू यसमा काम गर्दैछन्। भविष्यमा अधिक सेवाहरू उपलब्ध हुन सक्दछन्। तपाईं दिनको १,०1,080० येनको लागि हिउँदको लुगा लिन सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईं होक्काइडोमा days दिन भन्दा बढि हुनुहुन्छ भने, यो किन्नु सस्तो हुन्छ।
>> नयाँ Chitose एयरपोर्टको नजिक भाडा सेवा यहाँ छ
होक्काइडोको मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, तपाईंलाई मनपर्ने लेखहरू हेर्नुहोस्।